cc - Synonyms of cc | Antonyms of cc | Definition of cc | Example of cc | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for cc
Top 30 analogous words or synonyms for cc
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် CC Attribution-NoDerivs
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် CC Attribution-NonCommercial
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးများသော ပိုးသတ်ဆေးများ 2.5 cc per 1 gallon. Same as above.
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် CC Attribution ရိုးရိုးလိုင်စင်ကို CC Attribution share-alike အဖြစ်ချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ်။ အထက်က သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အကုန်တူတူပါပဲ။ ကွဲပြားခြားနားတာကတော့ အဆိုပါ work ကမှဆင်းသက်လာသော တနည်းအားဖြင့် အဆိုပါ work ကိုအမှီပြု၍ဆင်းသက်လာသော work များသည် မူရင်း share alike လိုင်စင်များကဲ့သို့ မူလဘူတ work ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကျော်အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း Wikipedia သည် ၎င်းရဲ့ content များကို အထက်ပါ လိုင်စင်ဖြင့်ပြဌာန်းထားသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ “ကျနော်တို့ပါတီမှာ လက်ရှိ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် CEC အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦး ရှိပါတယ်။ ဗဟိုကော်မတီ CC ကိုတော့ ၄၅ ဦးထိ ထားဖို့ လျာထားတယ်။ ပါတီဝင်တွေ မစည်းရုံးသေးဘူး။ CEC ၁၈ ဦးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့ကျမှ စစ်တွေမှာ ပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်မယ်။ ပါတီဝင်လှျောက်လွှာတွေလည်း ရိုက်ပြီးပါပြီ။ မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ စည်းရုံးရေးတွေ လုပ်သွားမှာပါ”
အင်တာနက် အီးမေး(လ်) သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော အရေးပါသည့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်။ ပို့သူနှင့် လက်ခံရရှိသူအကြား အီလက်ထရောနစ်ဖြင့် စာပို့ဆောင်သည့် သဘောတရားမှာ အင်တာနက်မပေါ်မီကာလက စာ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းများပို့ခြင်းနှင့် အချို့အဝက်ဆင်တူသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် ၎င်းမှာ အင်တာနက်နှင့် အင်တာနယ်(လ်) အီးမေး(လ်)စနစ်များ အကြားတွင် ခွဲခြားသိမြင်ရန် အရေးကြီးသည်။ အင်တာနက် အီးမေး(လ်)သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားနိုင်ပြီး လျှို့ဝှက်ကုတ်နှင့် မဟုတ်ဘဲ ပို့သူနှင့် လက်ခံရရှိသူတို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မရှိသော အခြားများပြားသော ကွန်ယက်များနှင့်စက်များပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်း တစ်စုံတစ်ယောက်က အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆပါက၊ မဆိုင်သည့် ဘေးလူများမှ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး မရိုးမသားပြုလုပ်နိုင်ရန်မှာ အတော်ပင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွင်မဆို IT နှင့် ယင်းတို့အား လိပ်မူမထားသော အခြားဝန်ထမ်းများ၏ အီးမေး(လ်)များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ရံဖန်ရံခါ ဝင်ရောက်ကြည့်ခြင်း အလုပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော အခြားအမှုထမ်းများ ရှိသော်လည်း၊ ကော်ပိုရေးရှင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ကွန်ယက်အတွင်းမှ မည်သည့်အခါမျှ သတင်းအချက်အလက်များ ထွက်မသွားသည့် အင်တာနယ်(လ်) သို့မဟုတ် အင်ထရာနက် မေး(လ်) စနစ်များမှာမူ ပိုမို၍ လုံခြုံစိတ်ချရသည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြားဖိုင်များကို အီးမေး(လ်)နှင့် တွဲဖက်၍ ပို့နိုင်သည်။ အီးမေး(လ်)များကို လက်ခံသူ အီးမေး(လ်)လိပ်စာများ အများအပြားသို့ cc-ed ခေါ် ကော်ပီ ပို့နိုင်ပါသည်။